Chili: namoaka fantsom-baovao ho an’olo-tsotra ny ONG ho an’ireo iharan’ny herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2009 14:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Araka ny feon’ny tranok’alan’izy ireo, dia nanomboka ny hetsika nataon’izy ireo tamin’ny taona 2006, tao aorian’ny fanafihana nataon’ny andian-jiolahy ny tranon’ny fianakaviana Fuenzalida Urzua ka tamin’izany no namakian’ireo tsy matao-tody ny trano, nangalaran’izy ireo ny fananany sy ny nandrombahan’izy ireo ny zazakely 8 volana teny an-tanan-dreniny ary nandrahona fa hamono azy. Rehefa tonga tao an-tokonana ny mpanao gazety mba hijery ny fisehoan’ny fandrahonana nahazo, dia nanapa-kevitra ireto mpivady fa manana safidy anankiroa, na hitsoaka ny mpanao gazety na ny hiaona amin’izy ireo ka hanambara ny fandehan’ny tantara. Andro vitsivitsy taty aorina dia tafatsangana ny tranok’ala, ary volana iray taty aorina, olona ho 3000 isa no nidina an-dalambe tao an-drenivohitra, mba hitakiana ny filaminana misimisy kokoa ho an’ny olom-pirenena, ny fiarovana ireo iharan’ny herisetran-jatovo.
Milaza ny tantaran’ny fikambanana ny horonantsary manaraka eto:
Mampiseho ny vokatry ny tahotra eo amin’ny fiainan’ny olom-pirenena andavan’andro ny horonantsary manaraka izay nalefan’ny luchitosnachitos, mpikambana ao amin’ny fiaraha-monina. Ho tsapantsika ny fahitana ireo fitaovam-piadiana miafina eny amin’ny zoron-trano eny rehetra eny rehefa hiditra an-trano ka hitady ny lakilen’ny fiarany ny vehivavy iray. Ao amin’ny andalana farany no miseho an-tselatra avy ao anaty solosaina ny hafatra manao hoe: Tsy matahotra izahay, Andao hamafisina ny lalana eto amintsika.”
Fa inona ary ny lalana tian’izy ireo tenenina?mampiseho ny eritreritry watamerigonzo mikasika ny sazy ho an’ny mpiherisetra ity horonantsary manaraka ity:
Asehon’ity horonantsary farany ity izay namboarin’ny olom-pirenena ny hoe ahoana ny fijerin’ireo mpiherisetra ny asa ratsiny sy ny lalana: Lalao hafa hampisaintsaina.
Azia Atsinanana 6 andro izay